MPANGALA-JAZA TENY AMBILANIBE
Nahazo fahafahana vonjimaika ilay lehilahy izay voarohirohy ho mpangala-jaza izay nosamborina tetsy Ambilanibe.
RAZANA NITERAKA OLANA
Lehilahy iray no nisy nandevina tao amin’ny tranony tetsy Alasora.
Nanome toromarika ny governemanta nandritra ny filankevitry ny minisitra omaly ny filoham-pirenena.
Mahakasika ny fanovàna governemanta izay tsy ho ela intsony dia fantatra fa minisitra telo no avy amin’ny filoha telo aloha Ravalomanana ary ny roa kosa dia avy amin-dRajaonarimampianina
Nambaran’ny tatitry ny filankevitry ny minisitra omaly fa antontan-taratasy miisa 19 vokatry ny hosoka no navoakan’ny teoanivon’ny
Anisan’ny akaiky indrindra ny renivohitra ary nahaontsa ny olona maro ilay tetsy Ambatonapoaka ny marainan’ny sabotsy teo. Anio no halevina ireo mpivady izay niara-maty tao anatin’ilay 4x4 izay nivadibadika rehefa vaky kodiarana tampoka teny am-pandehanana.
GABORARAKA NY HAINO AMAN-JERY
Gaboraraka tanteraka ny tontolon’ny haino aman-jery eto amintsika. Amin’ireo « licence » izay miisa 235 izay manan-kery amin’izao fotoana dia marobe amin’ireo ny tsy manara-dalàna akory ary tamingan-taratasy dia efa nahasahian’ireo tompony nanokatra ny fahitalavitra na ny onjam-peony. Tsy nisy tsy nibizna izany ny minisitry ny serasera nifandimby teto niaraka tamin’ny ekipany, raha jerena akaiky ny raharaha.
DEPIOTE TSY MANAIKY
Efa misy sahady ireo depiote tsy manaiky ny hanitsiana indray ny lalàna mifehy ny mpanohitra. Ny fampiharana ny lalàna efa misy no tokony hatao fa tsy ny fanitsiana azy. Misy amin’izy ireo no eo anivon’ny antoko TIM ary misy koa ny avy amin’ny antoko tsy miankina izay miara-miombon-kevitra amin’izany. Efa ho dimy taona izao no niandrasana ny didy fampiharana ity lalàna ity kanefa tsy mety tontosa.
AHOANA NY FITSENANA IREO ATLETA ?
Tsy mba misy mihitsy hatreto ny hetsika mifandraika amin’ny fitsenana ireo mpilalao malagasy niatrika ny lalaon’ny nosy tatsy Maorisy. Efa tena nanao ezaka mafy anefa ny mpilalaontsika ary nahazo medaly volamena 47 izy ireo ka nitarika ny laharana faharoa. Io no medaly betsaka indrindra azontsika hatramin’izay ary efa tokony hipetraka ao anatin’ny tantara. Ahiana hody maina ireo mpilalao raha izao fahanginana izao.
FATY OLONA TAMIN’NY 26 JONA
Tsy mbola nisy mangirana ny fanadihadiana momba ny tranga nahafaty olona teny Mahamasina ny 26 jona teo. Niezaka nanatona ireo tompon’andraiki-panjakana ireo fianakaviana niharam-boina fa toa tsy mbola nahita valiny ho azy ireo. Hatreto, tsy mbola nisy na dia iray aza voasambotra momba ity raharaha ity kanefa dia ampolony maro no namoy ny ainy ary zazakely ny ankabeazany. Tsy mba hiova sy hivoatra mihitsy ny fanadihadiana eto Madagasikara.